BAD63-A andian-jiro LED mitsitsy angovo avo lenta mipoaka (jiro amin'ny sehatra)
1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatically sprayed, ary ny bika aman'endriny.
2. Patented multi-cavity structure, power cavity, light source cavity ary wiring cavity Ny vatana dia mahaleo tena.
3. Manangana fitaratra mangarahara borosilicate avo lenta, mangarahara fonony atomization anti-glare famolavolana, dia mahatanty angovo avo fiantraikany, hafanana fusion, ary ny hazavana transmittance hatramin'ny 90%.
4. Stainless vy miharihary fasteners amin'ny avo harafesiny fanoherana.
5. Teknolojian'ny herin'ny fiara mandroso, fidirana midadasika midadasika, miaraka amin'ny tsy tapaka ankehitriny, fiarovana amin'ny faritra misokatra Fiarovana, fiarovana amin'ny faritra fohy, fiarovana amin'ny fiakarana, ary asa hafa.
6. Ampifandraiso ireo maody LED marika iraisam-pirenena marobe, teknolojia fizarana hazavana mandroso, fanamiana maivana sy malefaka, vokatra maivana ≥120lm / w, loko avo lenta, fiainana lava, maitso Sariaka ny tontolo iainana.
7. Ny fantson-drivotra manalefaka ny hafanana miaraka amin'ny rafitra fitarihana rivotra mba hiantohana ny loharanom-pahazavana LED Ny androm-piainan'ny fiainana.
1. Mifidiana tsirairay araka ny fitsipika ao amin'ny hevitry ny modely voafaritra, ary ampio ny fipoahana-porofo marika aorian'ny hevitry ny modely voafaritra.Ny embodiment manokana dia: "modely vokatra - kaody famaritana + marika tsy misy fipoahana + habetsan'ny baiko".Ohatra, raha ilaina ny jiro lampihazo 30W tsy misy fipoahana ary 20 ny isa, ny baiko dia: “Modely: BAD63-Specification: A30P+Ex d mbIIC T6 Gb+20″.
2. Ho an'ny endrika fametrahana sy kojakoja voafantina, jereo ny P431~P440 ao amin'ny Boky Torolàlana Fantenana Jiro.
IW5510 andian-dahatsoratra Portable hazavana fipoahana-porofo amin'ny ...
Modely Implication Features 1. Ny fotoana fiasana dia lava, hazavana mamirapiratra ary hazavana miasa amin'ny ora fiasana mitohy ao anatin'ny 10 ora, 20 ora na mihoatra.2. Enclosure fiarovana kilasy IP66, mba hahazoana antoka fa ny jiro amin'ny toe-javatra henjana isan-karazany sy azo antoka ny fampiasana.3. Akorandriaka ny fampiasana akora plastika vita amin'ny bala avy any ivelany, hery avo, fanoherana tsara.4. Ny lanjany maivana, azo fehezina amin'ny tanana, mihantona, buckle ary fitaovana hafa azo entina, raha toa kosa ny adsorption magnetika, mora ampiasaina.5. Batte mora ampiasaina...
Ny endri-javatra misy ny modely 1. Ny fefy dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firaka aluminium mahery vaika ho an'ny fotoana iray, izay manana hery avo, fiasa tsara amin'ny fipoahana.Ny ivelany dia nofafazana plastika tamin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta taorian'ny fipoahana tifitra tamin'ny hafainganam-pandeha avo.Izy io dia manana adhesion matanjaka amin'ny vovoka plastika ary ny fampisehoana anti-corrosive lehibe.Ny fasteners ivelany dia vita amin'ny vy tsy misy pentina.2. Azo ahodina 360° mitsivalana ary amboarina ao anatin'ny +90°～－60°.3. Ny rafitra mifantoka dia ao amin'ny l...